थाहा खबर: बजेटप्रति नेकपाका सांसदहरूको चर्को असन्तुष्टि, संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी
बजेटप्रति नेकपाका सांसदहरूको चर्को असन्तुष्टि, संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी
सांसद बानियाँ र महत
काठमाडौं : विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भइरहेको प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले मानवविकास सूचकांकमा पछि परेका क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिए संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
'भनूँ भने घरकै बुहारी, नभनुँ भने भ्रष्टै पारी भनेझैँ भएको छ' भन्ने उखानबाट विनियोजन विधेयकमाथि आफ्नो भनाइ राख्न सुरु गरेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद मोहन बानियाँले मानवविकासको सूचकांकमा पछि परेको, विकासका कुनै पनि पूर्वाधार नबनेको स्थानलाई आधार बनाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।
आफूलाई बजेटले विरोधमा बोल्न बाध्य बनाएको भन्दै बानियाँले दुर्गम क्षेत्र विकास समिति र गुम्बा व्यवस्थापन समिति भंग गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनले भने, 'दुर्गम क्षेत्रका जनता जसले सात दिन हिँडेर नुन खानुपर्छ। त्यहाँका जनताको लागि दया लाग्छ कि लाग्दैन, यो सरकार छ कि छैन। यो इण्डिकेट फलो गर्ने हो कि होइन? किन इण्डिकेट हामी फलो गर्छौं?'
सदियौँदेखि पछि पारिएको कर्णालीलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएको स्मरण गर्दै बानियाँले राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा नल्याइकन अल्पविकसित मुलुकबाट माथि उठ्न नसक्ने ठोकुवा गरे।
२०७५ साल वैशाख १ गते प्रधानमन्त्रीले रारामा पुगेर राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेको स्मरण गराउँदै उनले भने, 'हामीले कसरी मुगु फर्किने हो? यो अनुहार देखाएर कसरी जाने हो? एक रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छैन, रारा धर्तीको स्वर्ग, थाहा छ कि छैन? रारामा जान हामी रमाउँछौँ। राराका लागि एउटा गुरु योजनाका लागि बजेट छुट्याइनु पर्दैन्थ्यो?' उनको प्रश्‍न थियो।
उनले सातवटा प्रदेशलाई दामासायीका दरले गरिएको बजेट विनियोजन अपुग रहेको टिप्पणी गरेका छन्। जडीबुटी संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सरकारको ध्यान नपुगेको तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि मुगुका लागि आवश्यक बजेट विनियोजिन गर्न नसकेको भन्दै उनले भने, 'ख्याल ठट्टा गरेको हो यो? १० करोड रुपैयाँले के बनाउने, टालेर खाने हो?'
बानियाँले सांसदलाई दिने भनिएको चार करोड स्थानीय तहमा दिन आग्रह गरे। उनले भने, 'सांसदको चार करोड फिर्ता लिनोस्। बद्नाम नबनाउनुहोस्। घण्टी नभएको घाँडो, सांसदको मुण्टामा झुण्डाएर बद्नाम नबनाउनुहोस्, यो रकम फिर्ता हुनुपर्छ।'
मन्त्री, सांसद र सचिवका बाबुआमा पशुपतिमा रहेको भन्दै उनले एक लाखको इन्सुरेन्स कार्यक्रम फिर्ता लिई वृद्धभत्ता प्रतिमहिना एक हजार रुपैयाँ थप गर्न माग गरेका थिए।
'लाटो नाच्दैन, नाच्यो भने बाँच्दैन' भन्दै उनले निर्णय नसच्चिए एक्लै भए पनि संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिए।
नेकपाकै अर्का सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले अत्यन्तै उत्तम भनेर ल्याइएको बजेट २०४६ सालको संविधानजस्तो रहेको टिप्पणी गरे। पर्यटनमन्त्री हाबी भएकाले कर्णालीमय बजेट आएको उल्लेख गर्दे उनले मन्त्रालयमा मन्त्री हाबी र कर्मचारी हाबी भएका दुईवटा अतिका आधारमा बजेट विनियोजन हुने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। जुम्लामा एउटा मात्रै बजेट आएको, तर नजिकैको मन्त्रीको जिल्लामा ४४ वटा योजनामा बजेट आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री नभएका सांसद जिल्ला फर्कने अवस्था नरहेको बताए।
नेकपाका सांसदले मन्त्रीलाई भने : अन्त योजना नहाली आफ्नैमा खन्याउँदा लाज लाग्दैन?
कर्णालीका सांसद भन्छन् : खाऊँ कर्केली पेट फर्केली, नखाऊँ कर्केली सासु तर्केली
सदनमा प्रतिपक्षको सम्मान भएन, सरकार तर्साउने गरी अघि बढ्यो
प्रधानमन्त्रीका कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरिँदै
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक कार्यक्रममा हुने सहभागिता घट्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले स्वास्थ्यका कारण औपचारिक कार्य...
हेटौँडा : मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित मनहरि गाउँपालिका–८, सिमपानीस्थित निर्माणाधीन पर्यटकीय क्षेत्र पिस पार्कको सोमबार फिलिपिन्स...
नेविसंघको म्याद दुई महिना थपियो, संस्थापनइतर समूहको असहमति
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको कार्यकाल थप दुई महिना थपिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको कां...
जाजरकोट : छ महिनापछि गृह जिल्ला जाजरकोट पुगेका वन तथा बातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई नागरिकले गुनासो सुनाए। जिल्लामा ध्यान नदिएको भन...